Fomba mahomby amin'ny famoahana fampiharana Android amin'ny Google Play Store | Martech Zone
Ny fomba tsotra indrindra hizarana fampiharana Android dia amin'ny alàlan'ny fivarotana Google Play. Io no fomba sarotra indrindra ka tonga amina mpanjifa mety maro. Ny famindrana ny rindranasa voalohany ao amin'ny Play Store dia tsy dia manahirana loatra, araho fotsiny ireo torohevitra roa sy ny fangatahana nomaninao ho alaina.
Ny mpandrindra fampiharana Android dia miezaka manome anao ny fampiharana tsara indrindra azonao raisina amin'ny mpihaino faran'izay betsaka. Nandany fotoana be dia be ianao tamin'ny fanaovana ilay rindranasa, nahatanteraka ny zavatra mety rehetra ary nanolotra 100% ho an'ny fangatahanao. Amin'izao fotoana izao dia fotoana mety indrindra handefasana ny fangatahanao amin'izao tontolo izao. Maherin'ny 1 lavitrisa mpanjifa mavitrika Android no misy erak'izao tontolo izao. Ity dingana iray ity dia hahatonga anao hanakaiky kokoa hifandray amin'ireo vondrona liana tianao.
Manodidina ny 2.47 tapitrisa ny rindranasa azo idirana ao amin'ny Play Store ary manodidina ny 3739 ny fampiharana apetraka isan'andro.
Statistika, isan'ny fampiharana ao amin'ny magazain'ny App 2019
Tsy misy olona afaka mandà ny maha-zava-dehibe sy ny maha-zava-dehibe ny Google Play Store amin'ny sehatry ny rindranasa finday. Raha mila fantatrao - ny fomba fampisehoana ny fampiharana ao amin'ny Google Play Store, amin'izay fotoana izay dia hifarana eto ny fikarohanao. Misy hevitra iray izay tokony hanohizanao izany handefasana fampiharana amin'ny fomba mahomby amin'ny magazay google play. Manaraka ireo andalana ireo, ahoana ny fanombohantsika.
Tombano ny fangatahanao - Voalohany, tsy maintsy mizaha toetra ny fomba fampiharana mitovy amin'ny fomba azonao atao ianao ary mahazo antoka 100 isan-jato fa hanao Tsara, alohan'ny hamindrana ny fampiharana amin'ny fivarotana. Afaka mampiasa emulator ianao amin'ny ankapobeny noho io antony io. Ny fampiasana gadget nofehezina Android dia hanome ny fomba fitiliana matanjaka hatrany. Hanome anao ny traikefa amin'ny fampiasana ny rindranasao amin'ny gadget iray tena izy ary hanome hery anao handrava ireo bibikely.
Ny haben'ny fampiharana - Amin'ny fotoana anaovanao ilay fangatahana dia manandrana mampihena ny haben'ny fampiharana. Ny haben'ny fampiharana dia manandanja tokoa. Ny mpanjifa dia tsy mahatsapa ny filàna misintona rindrambaiko izay mitana toerana lehibe eo amin'ny tahiry fivorian'ny mekanika. Eny, na i Google aza dia mamela ny haben'ny fampiharana hatramin'ny 50MB. Raha goavana ny fangatahanao dia mila tatitra momba ny fampandrosoana APK ianao hampisaraka azy ho fizarana mba hahafahana mamindra azy. Tokony homena marika amin'ny Google Play Console ianao ary ho distributer Play. Na eo aza ny zava-misy fa ny fampiharana anao dia mamakivaky ity toerana fitanana azy ity, amin'izay fotoana izay dia mila mampiasa ny firaketana ny Android APK ianao, handefasana tsara ny rindranasao. Ity dia hampisaraka ny fangatahanao ho amin'ny sehatra ary mety hatramin'ny 2GB ny tsirairay, manome toerana 4GB fanampiny ho an'ny fampiharana anao. Ny fampahalalana fanampiny dia apetraka ao amin'ny Google Cloud ary averina amin'ny fotoana rehetra ampidirina ilay fampiharana.
Raiso ny fahazoan-dàlana amin'ny App - Tsy handratra anao ny fahazoan-dàlana alalana ny fangatahanao mandra-pamindranao ny rindranasao amin'ny Google Play Store.
Mifantoha amin'ny firaketana APK miaraka amin'ny ID Bundle sy ny Isa Isa - Mila manangana tatitra APK ianao amin'izay ahafahanao manokana isa isan-karazany ho an'ny rindranasao izay hanampy anao any aoriana rehefa mila mamindra tatitra hafa momba ny rindranasao ianao. Ny ID Pack dia antsoina koa hoe App ID ary ampiasaina hanamboarana fampiharana iray karazana, ampahany lehibe izy io rehefa maneho ny fangatahanao ianao. Ity dia azo ampiharina amin'ny fampiharana feno ho an'ny Android 5.0 na mihoatra.
Tokony hanao sonia ny fampiharana amin'ny mari-pahaizana momba ny fiarovana - Ity dia testamenta tsara voamarika ho APK izay ilainao isaky ny mizara fampiharana amin'ny Play Store ianao. Raha tsy izany dia antsoina hoe JSK antontan-taratasy misy fanamarinana, ohatra, ny fehezanteny miafina Keystore.
Ataovy ny lisitry ny App Store - Ny fandefasana fampiharana dia singa iray matanjaka izay manampy ny mailakao amin'ny fakana fampidinana. Tsy ny olona tsirairay no manome ny fotoanany amin'ny fandefasana fampiharana fa kosa amin'ny tsy fahafahanao manao izany alohan'ny andefasana fampiharana android dia hahita valiny mahavariana ianao. Mila manome angona vitsivitsy amin'ny mpanjifa ianao momba ny karazana fampiasana azy sy ny toetrany.
Dingana handefasana fampiharana Android amin'ny Google Play
Alohan'ny handefasana fampiharana Android amin'ny Google Play, alao antoka fa efa voaomana ny zava-drehetra. Ilainao ny maka sary fakana sary amin'ny fisoratra nataonao (amin'ny kalitao avo), ny rafitry ny fampiharana ary mazava ho azy, rakitra APK (ilay fampiharana mihitsy). Misy fameperana henjana momba ny haben'ny fampiharana. Ny habe faran'izay mahery indrindra dia 100 Mbytes. Aleo raha toa ka mihoatra ny 50 Mbytes fotsiny ianao, amin'izay fotoana izay ny mpanjifa monina amin'ny faritra misy tamba-jotra mahatsiravina dia afaka mampiasa ny rindranasao. Ireto ny fomba hizarana fampiharana Android amin'ny Google Play:
Mamorona kaonty mpamorona - Sokafy ny Google Play Console ary manaova kaonty injeniera. Ohatrinona ny vidin'ny fizarana rindranasa Android? Mitentina 25 $ ny hetsika. Mandoa indray mandeha monja ianao, ny rakitra dia manome anao tombontsoa hizara ny isan'ny fampiharana izay ilainao isaky ny misy na aiza na aiza.
Soraty ny lohateny sy ny fanehoana ny fampiharana - Malina kokoa ny mandinika azy alohan'ny fizarana. Rehefa manao fikarohana ianao mitady teny fiambenana hanampiana azy ireo amin'ny sary fampiharana. Ny zavatra voalohany tsikaritr'ilay mpampiasa dia ny anaran'ny fampiharana, zavatra mahasarika manampy hisarika ny sain'ny mpampiasa rehetra! Ny fifantohana dia tokony ho amin'ny anarana mahafinaritra sy mamaritra.
Ampidiro ny sary fakana sary - Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa avo lenta ny pikantsary. Hamarino tsara fa ny sary dia mampiseho fisongadinana miavaka izay apetrakao amin'ny fampiharana anao, na ny eritreritra voalohany momba ilay fampiharana.
Manapaha hevitra ny naoty naoty amin'ny fampiharana nataonao - Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mamaly fanontaniana vitsivitsy ianao hanapahana ny isa naoty momba ny zava-mahadomelina ao amin'ny entanao. Antenaina ny hamerana ny ankizy tsy hisintona ny rindranasao raha sendra misy atiny lehibe izany. Aleo ianao mamaly raha tsy izany dia holavina ianao amin'ny famoahana fampiharana Android mankany amin'ny Google Play.
Safidio ny fanasokajiana fampiharana - Manan-danja ihany koa izy io amin'ny antony mampiakatra ny tsy fetezanao amin'ny fisintomana. Raha sanatria misafidy fanasokajiana tsy mendrika ianao dia tsy hanana safidy ny olona hahita izany ao amin'ny kilasy tokony hisy azy!
Fehezo ny olana momba ny fiarovana - Raha toa ka mampiasa ny mombamomba ny mpanjifa tsy miankina izay ilainao ny fampisehoana azy ary ampidiro ny fomba fiarovana izay ahazoanao antoka fa tsy hampiasa io fampahalalana io ho an'ny tombontsoanao mety. Amin'ny paikady fiarovana dia tokony hampahafantarinao amin'ny mpanjifa izay fampahalalana hangonina, ny fomba hitondrana izany data izany ary iza no hanatona azy.
Ny zava-misy fa ny 42 isan-jaton'ny mponina manerantany no mampiasa media sosialy dia antony ampy hahatonga azy io ho sehatra tsara indrindra amin'ny doka.
Raha nieritreritra ianao fa aorian'ny namindranao fampiharana tamim-pahombiazana ny Play Store dia afaka miala sasatra amin'ireo hazo kely ianao. Betsaka ny hetsika mila atao mandroso! Miankina aminao (na vondrona mety aminao) ny ain'ny fampiharana anao aorian'ny famoahana azy. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fanohanana aorian'ny fandefasana dia mamaritra ny fahatongavan'ny fampiharana sy ny fahombiazan'ny mpampiasa.
Ny hack tsara indrindra eto dia ny mirindra amin'ireo mpanjifanao. Ny mpanjifa mavitrika no mpitari-dalana tsara indrindra. Izy ireo dia afaka mizara fanehoan-kevitra feno fahitana avy amin'ireo tena mpampiasa izay azo ahitsy arak'izany. Raha hampiasa ny tsikera ataon'ny mpanjifa ianao ho loharanon'ny angon-drakitra sarobidy dia azonao atao ny manatsara ny fidiram-bola ary manao azy io ho lehibe kokoa.
Mikasa ny hampivelatra ny fampiharana findainao manokana? Mifandraisa aminay, Sysbunny dia orinasam-pampandrosoana fampiharana finday tadiavina izay namolavola endrika tsara tarehy, ary fampandrosoana haingana ny fampiharana finday haingana.
Tags: google play storefinday fampiharanamamoaka fampiharanamamoaka fampiharana findaysysbunny
Haingam-pandeha: Ovaina amin'ny laoniny an-tsakany sy andavany ny Salesforce miaraka amin'ny fahaizany mifanakalo